I-Bohemian Villa Beach & Pool 2 - I-Airbnb
I-Bohemian Villa Beach & Pool 2
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMiguel
Ifakwe kwenye yezona ndawo zikhethekileyo zaseCosta de la Luz, eCadiz. Inamagumbi okulala ama-3, amagumbi okuhlambela ayi-2 agcweleyo (enye kwisuite) kunye negumbi lokuhlala elikhulu. Inegadi enkulu, ichibi labucala lokuphumla kunye nendawo eqhelekileyo yeBBQ enezindlu ezimbini ezingakumbi.
Ipasile inezindlu ezi-3 kwaye ibekwe kwenye yezona ndawo zibalaseleyo zokuhlala eRoche, umgama wokuhamba uyonwabele ulwandle, ujikelezwe lihlathi lendalo lepine elibonelela ngemozulu ekhethekileyo efudumeleyo unyaka wonke.
IBohemian Villa Beach kunye nePool 2 ibekwe eCabo Roche, enye yezona ndawo zikhethekileyo kunye neendawo zokuhlala ezinobunewunewu zaseCosta de la Luz Cadiz.
I-villa inamagumbi okulala ama-3, enye inebhedi ezimbini kwaye enye ineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Kukho amagumbi okuhlambela ama-2 agcweleyo (enye in suite) kunye negumbi lokuhlala elikhulu. Ukukhanya kwendalo koyisa igumbi ngalinye.
Kukwakho nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (i-oveni, ii-microwaves, umatshini wokuhlamba izitya, ivitro kunye nefriji enye), i-terrace enkulu e-1 enegadi ishawari yangaphandle, ichibi (elikhoyo kwiinyanga zasehlotyeni) kunye nendawo yekona yebarbecue.
4.72 out of 5 stars from 55 reviews
4.72 · Izimvo eziyi-55
Umgama wokuhamba: Ivenkile enkulu, ikhemesti, iindawo zokutyela, ulwandle, inkundla yentenetya, ibhola ekhatywayo, njl.
Ngemoto: Ukukhwela ihashe, amabala egalufa amathathu, kunye ne-surf/Kite surf.
Indawo egqibeleleyo yokuqhawula kwaye uqhagamshelane nendalo
1- Yihloniphe kwaye uyikhathalele ipropati.
2- Ukucima izibane kunye nezixhobo zombane phambi kokuba ushiye yonke indawo.
3- Abantu abasuka ngaphandle abavumelekanga ukuba bangene endlini.
4- Akukho maqela avunyelwe kwiflethi.
5- Intlonipho kubumelwane ubuthongo.
6- Yazisa umamkeli malunga nayiphi na ingxaki kwipropati ngexesha lokuhlala.
3- Abantu abasuka ngaphandle abavumelekanga ukub…
Inombolo yomthetho: VFT/CA/01302